Maxaa uga Baahan tahay inaad ka Ogaato koobka Kooxaha Adduunka Sanadkan 2018 iyo halka lagu qabanayo – Gool FM
Maxaa uga Baahan tahay inaad ka Ogaato koobka Kooxaha Adduunka Sanadkan 2018 iyo halka lagu qabanayo
CR Shariif November 13, 2018
( Dubai ) Nof 2018. Koobka kooxaha adduunka 2018 ayaa goor dhaw bilaaban doona waxaana lagu marti galinayaa 12 December dalka imaaraadka Caraba ee United Arab Emirates halkaa uu ka socon doonaa ilaa 22-ka bisha dambe ee December.
Todobaadkan waxaa la xaqiijiyay kooxaha ku guuleystay koobabka qaaradaha Africa iyo Asia waana naadiyada kala ah ES de Tunis oo finaalka garaacday Al Ahly iyo Kashima Antlers oo barbaro 0-0 kula gashay Tehran naadiga Persepolis ka hor inta aysan lugta labaad ku adkaan 2-0.
Labada koox ee ka socda Tunisian siyo Japanese ayaa kula biiray naadiga kal hor koobka usoo baxay ee Real Madrid taa oo ku guuleysatay koobka Champions League xagaagii tagay, iyo kooxada ka socota dalka koobka marti galinaya ee Al Ain taasoo markiii ugu horreysay tartankan cayaareeysa markii ay ku guuleysatay horyaalka Abu Dubai ee UAE Pro-League.
Waxaa markii u horreysay qaarada waqooyiga ameerika umataleysa koobka kooxaha adduunka naadiga Mexico ee Guadalajara. Halka badaha ay mataleyso kooxda Wellington.
Labada naadi ee Boca Juniors ama River Plate mid kood ayaa buuxin doona 6-koox ee sida rasmiga ah uga qeyb galeysa koobkan marka la xaqiijiyo kooxda ku guuleysatay koobka Libertadores ee ah Champions League qaarada koonfur Ameerika 24 bishan November kaddib kulankii hore oo ay barbaro 2-2 ah galeen.
Real Madrid ayaa dooneysa markii seddaxaad oo xariira iney ku guuleysato koobkan oo sanadkii labaad lagu qabanayo UAE.
CEEBEEY TACAAL: Da’yarka Man City Phil Foden ayaa 2-Daqiiqo oo qura uu Cayaaray Kulankii Manchester Derby ka baas Batay labada Laacib ee ugu Qaalisan Manchester United